ကိုလက်စထရောမြင့်မားလား အနိမ့်ကိုလက်စထရောမှအစားအစာများကိုရှာဖွေပါ စတိုင်လ်အမျိုးသားများ
အစားအစာကိုလက်စထရောကိုလျှော့ချဖို့လား? အကယ်၍ သင်၏အစားအစာအစီအစဉ်ကိုဤပြproblemနာကိုထိန်းချုပ်နိုင်စေရန်ကောင်းမွန်သောလှည့်ကွက်တစ်ခုပေးရန်လိုအပ်ပါကသင်သည်မှန်ကန်သောနေရာသို့ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်သည်။
2.3 ပဲပင်များ၊ အခွံမာသီးများနှင့်အစေ့များ
2.5 အိုမီဂါ 3
သင့်တွင်လက်စထရောမြင့်မားသည်ဟုမကြာသေးမီကပြောခဲ့ဖူးပါသလား။ ဒါကဖြစ်ဖြစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကြိုတင်ကာကွယ်ချင်တာလားပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အခုအချိန်မှာမင်းရဲ့အစားအစာဟာအလှည့်ကျသင့်နေပြီ။ ထိုအရာကအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
ပထမ ဦး ဆုံးအနေဖြင့်၊ သင်သည်ပြုပြင်ထားသောအစားအစာများစားသုံးမှုကိုတတ်နိုင်သမျှလျှော့ချသင့်သည်။ ဤရွေ့ကားအစားအစာရွေးချယ်စရာအဆင်ပြေဖြစ်ကြပြီးမကြာခဏအလွန်အရသာရှိတဲ့။ သို့သော်၎င်းတို့သည်ဆား၊ အဆီ၊ သကြားနှင့်အတုပါဝင်ပစ္စည်းများစွာပါ ၀ င်သည်။ အထူးသဖြင့်သကြားလုံး၊ ငန်သောမုန့်များနှင့်အေးခဲနေသောအစားအစာများပေါ်တွင်မကြာခဏပေါ်လေ့ရှိသော trans trans fats များအန္တရာယ်ရှိသည်။ သင်သတိထားသင့်သည့်နောက်အရင်းအမြစ်မှာအစာရှောင်ခြင်းအစားအစာဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်အာဟာရသည်အလွန်ဆင်းရဲခြင်း (သို့) တိုက်ရိုက်ပျက်ခြင်းဖြစ်သည်။ အကျိုးဆက်အနေဖြင့်၎င်းတို့သည်သင်၏ကျန်းမာရေးအတွက်အိုမီဂါ ၃ fatty acids (သို့) ဖိုင်ဘာကဲ့သို့သောသင်၏ကျန်းမာရေးအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ ရှောင်ကြဉ်ရမည့်အစားအစာများနှင့် ပတ်သက်၍ ဆိုဒါများနှင့်အချို့သောဝက်အူချောင်းများနှင့်တစ်သင်းလုံးကကစားသမားများကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။
အပင်များ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ အစေ့များ၊ ပဲပင်များနှင့်ကျန်းမာသောအဆီများဖြင့်အစားထိုးပါ။ ဤနည်းဗျူဟာသည် LDL ကိုလက်စထရောသို့မဟုတ်မကောင်းသောကိုလက်စထရောကိုလျှော့ချရန်ခွင့်ပြုပေးပြီး၎င်းသည်၎င်း၏အဆင့်တက်သည့်အခါနှလုံးရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေကိုတိုးစေသည်။ ဤအစားအစာများကို အခြေခံ၍ စားသုံးခြင်းအစီအစဉ်သည်သင်၏ကိုလက်စထရောအတွက်ကောင်းသော်လည်း၎င်းသည်သင့်အားသွေးပေါင်ချိန်မြင့်ခြင်း၊ လေဖြတ်ခြင်းနှင့်အချို့သောကင်ဆာအမျိုးအစားများမှလည်းကာကွယ်ပေးလိမ့်မည်။ သင်၏ကိုယ်ခံအားစနစ်ကသင့်ကိုများစွာကျေးဇူးတင်လိမ့်မည်။
ကိုလက်စထရောကိုလျှော့ချဖို့အကောင်းဆုံးအစားအစာကဘာလဲဆိုတာကြည့်ရအောင်။ စျေးဝယ်တဲ့အခါစဉ်းစားသင့်သောကျန်းမာရေးရွေးချယ်မှုများမင်းမှာကိုလက်စထရောမြင့်တက်ပြီးဖြစ်ဖြစ်၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပိုဂရုစိုက်ချင်တာလား။
လတ်ဆတ်သောအစားအစာများကိုသင်၏စျေးဝယ်လှည်း၌များများစားသင့်သည်။ ထို့အပြင်သစ်သီးနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များသည်ကိုလက်စထရောနှင့်အဆီဓာတ်နည်းသောကြောင့်၎င်းသည်သင်၏အစားအစာအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်သည်။ ဒီတော့ ပန်းသီး၊ လိမ္မော်သီး၊ ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်း၊ ပဲစိမ်း၊ ငရုတ်သီးနှင့်ဆလတ်၊ ဟင်းနုနွယ်ရွက်သို့မဟုတ် arugula ကဲ့သို့အရွက်အစိမ်းရောင်များကိုဝယ်ယူရန်စဉ်းစားပါ.
အသားနှင့်ပတ်သက်သောအခါ, ကိုလက်စထရောမြင့်မားသောသူတို့သည်ပိုပြီးချောကျိကျိသောသူတို့ကိုရှောင်ရှားသင့်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်အရေပြားမရှိသောကြက်နှင့်ကြက်ဆင်တို့သည်အလွန်ကောင်းသောစိတ်ကူးဖြစ်သည်။ ဝက်သားနှင့်အမဲသားများသည်ပိန်နေရမည်။
သင်၏အစားအစာတွင်ရှိသောပေါင်မုန့်၊။ ရည်ရွယ်ချက်မှာအမျှင်ဓာတ်နှင့်ပရိုတိန်းများအပါအ ၀ င်အာဟာရများပိုမိုရရှိရန်ရှုပ်ထွေးသောဘိုဟိုက်ဒရိတ်များများစားသုံးမှုကိုတိုးမြှင့်ရန်ဖြစ်သည်။
အကယ်၍ သင်သည်ကိုလက်စထရောကိုလျှော့ချရန်လိုအပ်ပါကပဲပင်သည်သင်၏အစားအစာ၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သင့်သည်။ သင်၏စျေးဝယ်လှည်းသို့ပဲများ (သင်အများဆုံးကြိုက်သည့်အမျိုးအစား)၊ ပဲပုပ်၊ ကုလားပဲများကိုထည့်ပါ...
အခွံမာသီးများနှင့်အစေ့များသည်အလွန်ကျန်းမာသောရေစာဖြစ်ပြီးအထူးသဖြင့်မဆားငန်သောမျိုးများဖြစ်ပြီးကိုလက်စထရောကိုလျှော့ချရန်ကောင်းမွန်သည်။ သင့်မီးဖိုချောင်တွင်အခွံမာသီး၊ ဗာဒံသီး၊ ဖရုံသီးအစေ့များ၊ နေကြာစေ့များကဲ့သို့သောအစားအစာများအမြဲတမ်းရှိနေကြောင်းသေချာစေပါ…အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ၎င်းသည်ကယ်လိုရီများပြားခြင်းကြောင့်ဝေမျှခြင်းကိုထိန်းချုပ်ရန်အဆင်ပြေသည်။
ကယ်လ်ဆီယမ်သည်အရေးကြီးသောအာဟာရဖြစ်ပြီး၎င်းကိုနည်းလမ်းများစွာဖြင့်သင်ရရှိနိုင်သည်။ အရိုးရှင်းဆုံးကတော့အဆီနည်းသောဒိန်ချဉ်၊ ဒိန်ချဉ်၊ နို့နှင့်ဒိန်ခဲတို့ဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်သင်လည်းလုပ်နိုင်ပါတယ် ကယ်လစီယမ်ကိုရယူပါ တူနာငါးနှင့်ဆော်လမွန်ငါးများအနေဖြင့်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ သက်သတ်လွတ်များနှင့်အစိမ်းရောင်အရွက်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များအပါအ ၀ င်ဤသတ္တုဓာတ်အတွက်နေ့စဉ်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်သက်သတ်လွတ်များတွင်တိရစ္ဆာန်မဟုတ်သောအခြားနည်းလမ်းများရှိသည်။
ကယ်လစီယမ်ပိုလာရင် ၎င်းကိုစုပ်ယူနိုင်ရန်ကူညီပေးသောဗီတာမင် D နှင့်၎င်း၏ဆက်နွယ်မှုကိုလစ်လျူရှု။ မရပါ။ ၎င်းကိုကြက်ဥ၌သာမကငါးအချို့တွင်တွေ့နိုင်သည်။ အချို့သောနို့ထွက်ပစ္စည်းများ၊ မာဂျင်နှင့်ခိုင်ခံ့သောစီရီရယ်များတွင်ဗီတာမင် D လည်းရှိသည်။
ဤကျန်းမာသောအဆီသည် HDL (သို့) ကိုလက်စထရောအဆင့်ကိုမြင့်စေနိုင်သည်။ သငျသညျအိုမီဂါ 3s သံလွင်နှင့် canola ဆီမှတဆင့်ရနိုင်သည်။ အခြားအပင်များ၏ရင်းမြစ်များမှာ walnuts နှင့် flaxseed တို့ဖြစ်သည်။ ဆော်လမွန်ငါးများ၊ တူနာငါးများ၊ မက်ဒရယ်များနှင့်ငါးများကဲ့သို့သောအလှူငွေများကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့မမေ့သင့်ပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - စတိုင်လ်အမျိုးသားများ » လူနေမှုပုံစံစတဲ့ » ကိုလက်စထရောကိုလျှော့ချရန်အစားအစာများ